Foornada dhalaalaysa, oo loogu talagalay sidii foornada soo-gelinta kanaalka, leeyahay a wadarta awoodda haynta ee 50 t oo waxtar leh
waayo,-miisaankiisu yahay 40 t badnaan. Awoodda dhalaalista waxaa soo saaray afar inductors oo rakiban at xaglo qeexan on
dabaqa foornada leh a wadarta xamuulka kuxiran ee 3,400 kW. Soojire kasta wuxuu soo bandhigayaa tifaftire u gaar ah oo loogu talagalay howlaha xakamaynta shaqsiyeed.
In ka dhacdo oo ah cillad soosaarida hal inductor, kuwa kale waxay hayaan cidhibta kulul at heerkulka halka qalabixiyaha cilladaysan yahay
lagu beddelayo. Foornada ayaa mar kale diyaar u ah howlaha wax soo saarka ka dib a mudada 12 saacadood. Birta la shubay ayaa ah
ku shubtay baxay iyada oo loo marayo maraakiibta foornada laguna wareejin karo at eber dushiisa ilaa foornada haysata at ka heerka of 4 t/h. Haysashada-iyo-foornada ridaya waxay sidoo kale aqbashaa dhalaalka maraya foornada. Tani waxay awood u siinaysaa biraha ilaa lagu celiyo ilaa foornada dhalaasha haddii loo baahdo, sidoo kale at eber dushiisa.
Nolosha Adeegga Inductor iyo Bedelaadda Time
The nolosha inductor waxay kuxirantahay awooda la rakibay, ka nooca nidaamka qaboojinta, qaabka kanaalka, iyo nooca dahaarka dhoobada. Adeeg nolosha 250 maalmood ayaa lagu soo waramayaa inay hawo tahay-la qaboojiyey inductors RATING_STRING at 250 kW, laakiin kaliya 100 maalmo loogu talagalay qiimeynta 400 kW. In labada xaaladaha, soosaarka birta wuxuu ahaa qiyaastii 1,600 t aluminium.4
Adoo hagaajinaya qaboojinta saamaynta iyo nooca dahaarka dhoobada, waxaa suurtagal ah 400-kW inductors inay gaaro arrimaha nolosha ee
250 maalmood iyo dheeraad ah oo leh soo-saarka biraha ee 2,500 t/industres. Si kastaba ha ahaatee, Nolosha adeegga ee kaliya 100 maalmaha sidoo kale waa lama yaqaan. Warshad kale oo shaqeyneysa wararka nolosha adeegga arrimaha of 15-27 bilood.
Heer sare industres qiimeynta 900 kW iyo dheeraad ah oo leh proQiimaha marinka of 30 t/ maalinkiiba inductor, u baahan dardaaran
socodka ah ee biraha culus iyo qaboojin xoog leh, waxay leeyihiin ma weli ku jira hawl kasta oo waqti dheer ah. Khibraddii ugu horreysay ayaa muujisay in socod xoog leh sababaha nabaad guurka vertical channels.
Xitaa in kastoo ay ahayd ma lagama maarmaan ilaa nadiifi kanaallada, ka la doonayo adeegga nolosha inductor ahaa dhimay. Furhagaajinta kuleylka waxaa lagu sameeyay iyadoo la yareynayo tilmaamaha qulqulaya iyo iyadoo la siinayo a deganaansho badan biyaha qaboojinta
nidaamka, taas oo rajo gelinaysaa waayo, helitaanka nolosha adeegga arrimaha of 12 bilood kuwa sare-qalabka tamarta.
Aluminiumka aluminiumka ah ayaa lagu shaqeyn karaa qaybo kala duwan oo dhalaalaya:
• si toos ah-foornooyinka kululaynta (gaaska ama saliida-rideen) leh tas-hiilaadka soo-kabashada kuleylka
• Foornooyinka dhalaalaya induction, kanaalka ama nooca la shiido.
Xulashada unugga waxaa lagu go'aamiyaa ugu horreyn helitaanka iyo qaabka tamarta iyo wax soo saarka kharashka.
Shidaalka hada la soo diro ayaa inoo baaqaya ilaa re-qiimee helitaankiisa mustaqbalka. It is ilaa laga filan karo in sare u kaca qiimaha shidaalka sidoo kale waa la heli doonaa an kororka qiimaha tamarta beddelka ah- korontada- xaaladdee feker waa in be la siiyey
wax walba ka sarreeya ilaa isticmaalka ugu wanaagsan ee foomka tamarta beddelka ah. Halkan, Waxay bixisaa foornada induction a
sare-Cunsurka isticmaalka ka faa'iideysiga korantada, maadaama kuleylka uu ka dhasho induction koronto si toos ah qubayska.
Shaqada oo kordheysa kharashka waddamada warshadaha horumaray iyo qiimaha biraha ee sare ayaa inagu waajibinaya ilaa remelt xitaa hooseeya-fasalka, iftiinka-jeex jeexan iyo ilaa shaqaaleysiin a halbeegga dhalaalaya halka waxyaabaha muhiimka ah in go'aamiso ka shaqeynta kharashka hooseeyaan, oo ah tamar kharashka, khasaaro dhalaasho, dayactirka kharashka, iyo foosha kharashka.
Categories Technologies Tags foornada indhaha aluminiinka, aluminium dhalaalaya, foornada aluminiumka, Qiimaha foornada aluminiumka, Aluminiumka wax lagu tumo, foornada aluminiumka, iibso dhoobada aluminium, foornada aluminiinka induction, aluminium dhalaalaya oo dhalaalaya, Foornada dhalaalida induction, induction dhalaalida dhalaalka foornada aluminium, qashin jajabka aluminium Post navigation